Avy tany Frantsa : hihaona amin’ny mpankafy i Black Nadia | NewsMada
Efa nampanantena izy nialoha ny niaingany fa tsy maintsy hisy ny seho ho mariky ny fifampiarahabana noho ny taona vaovao, eo amin’i Black Nadia sy ny mpankafy azy eto an-toerana. Fantatra, fa higadona anio rehefa avy nanatontosa seho vitsivitsy tany Frantsa i Black Nadia sy ny tariny. Manome fotoana avy hatrany ireo mpankafy azy etsy amin’ny Jao’s Pub Ambohipo kosa izy, rahampitso manomboka amin’ny 9 ora alina.
Hisantatra ny “cabaret” ao amin’ity toerana ity i Black Nadia. Hifampizara ny sehatra amin’i Jojih, mpanakanto vao misondrotra, kanefa efa hainy tsara izy amin’izany. Tsy hafa mantsy, fa mpandihy tao amin’ny tarika ihany i Jijih, izay nisafidy ny hirona amin’ny hira sy mozika indray. Ho an’ireo nahatsikaritra, efa namoaka ny rakitsary “Ray sy ray” i Black Nadia sy Jijih. Natao indrindra ho fanohanan’i Black Nadia ny talenta vao misondrotra izany.
Raha hiverenana ny fivoahana tany ivelany, fahombiazana avokoa ny seho rehetra. Anisan’ny nafana indrindra ny “Tsinjaka be”, tany Paris, izay nentina nanaovam-beloma ny taona 2015 sy nandraisana ny taom-baovao.